Rose of Sharon: လင်တော်မောင်ခရီးသွားတဲ့အခါ
Posted by rose of sharon at 7:41 PM
suburbanian August 4, 2009 at 10:27 PM
ကန်စွန်းရွက် ချဉ်ဟင်း ချားချင်နေတာကြာပီ... အပုံလဲမပါဘူး။။....
PAUK August 4, 2009 at 10:28 PM
ငပိရည်ဖျော်နဲ့ ကန်ဇွန်းရွက်ချဉ်ရည်လဲ စားချင်တယ်..
စူးနွယ် August 4, 2009 at 11:02 PM
လသာည August 4, 2009 at 11:06 PM
စားချင်တယ်။ စားချင်တယ်။ ရခိုင်မုန့်တီလည်း ကြိုက်တယ်။ ချဉ်ရည်ဟင်းနဲ့ ဆိတ်သားအာလူးဟင်းလည်း စားချင်တယ်။ စားသွားတယ်၊ စိတ်ကူးနဲ့။ :P
ဟင်..တစ်ခုခုလိုပါတယ်အောက်မေ့တာ။ ကော်ဖီလေ၊ အစ်မ ကော်ဖီမပါသေးဘူးလေ။ နေ့လည်နှစ်နာရီလည်း မကျော်သေးပဲနဲ့.. :(
အစ်မ နောက်တာနော်။ အခု ရေသောက်ပြီး ပြန်ပြီ။ ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ဗိုက်ကဆာပြီးရင်း ဆာလာတယ်။ ရှိတဲ့ ကြက်ဥလေးကြော်ပြီး ထမင်းစားလိုက်ဦးမယ်။
အနော် August 4, 2009 at 11:39 PM
ပီးတော့ ငပိရည်စားချင်တယ် ဒီက ငပိရည်တွေက ဘာအမွှေးနံ့တွေထည့်လဲ မသိဘူး ဘယ်လိုမှစားမရ :(
နီးရင် အိမ်လာလည်ပီး လာစားပါတယ်...
အခုတော့ မျက်မှန်းနဲ့စားသွားတယ် ကုန်ပီ နောက်လူအတွက်ကျန်တော့ဘူး ရှလွတ်.................
ရခိုင်မုန့် တီလည်း သောက်ချင်တယ်။
ဆိတ်သားနဲ့ အာလူးတဲ့ ကြိုက်တယ်။
မအယ်တို့ဆိတ်သားမရဘူး။
သိုးသားပဲရှိတယ်။ နံတယ် သိုးက ။
သားကြီး August 5, 2009 at 12:07 AM
မစားခဲ့ရတာပဲကြာပေါ့ နောက်ပြီး ကန်စွန်းရွက်ချဉ်ရည်ဟင်း
ရွှေစိတ်တော်ညိုမယ်ဆိုတော့ မောင်မင်းကြီးသားက ဝိုင်သောက်တာကိုလက်မခံဘူးပေါ့ ဟုတ်လား?
ပြောလိုက်ပေါ့ဗျာ “မောင့်အလွမ်းပြေသောက်မိတာပါ”လို့ :P
သားကြီး August 5, 2009 at 12:09 AM
ပြောဦးအဲဒါအမေနဲ့တူလို့လား အဖေနဲ့တူလို့လားဆိုတာ :)
မိုးစက်အိမ် August 5, 2009 at 12:58 AM
ရှယ်ဘဲ အမရယ် ရခိုင်မုန်.တီက ကြိုက် မှ ကြိုက်
ဘဲဗျာ ... ဆိတ်သား နဲ. အားလူးကလည်း
ဘာပြော ကောင်းမလည်း ဒီနေ. ဟင်းမကောင်း
တာနဲ. အတော် ဖြစ်သွားတယ် ... :)
kiki August 5, 2009 at 2:08 AM
စားချင်တယ် .. စားချင်တယ်....စားချင်တယ် ဗျိုးးးးး
ဒီလိုကြီး မနှိပ်စက်ထားပါ နဲ့ လူကိုလေ ..ရှလွတ်
မြင်သာ မြင်ရ ၊ မစားရ၍ ၊ တောကပြိတ္တာ ဖြစ်မည်တည်း ....
ဂွီ ဂွီ မြည်ပြီး ပြန်သွားတယ် ...
ThuHninSee August 5, 2009 at 3:50 AM
rose of sharon August 5, 2009 at 6:51 AM
စူးနွယ်ရေ ရခိုင်မုန့်တီကချက်ရတာလွယ်ပါတယ်.... (ချက်သွားတဲ့သူကပြောတာ)
လသာညရေ ကော်ဖီနဲ့ပွဲတော်စတည်တာ... ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သတိမရလိုက်ဘူး...
အနော်ရေ ဒီကငါးပိတွေလဲဒို့မကြိုက်ဘူး... ရန်ကုန်ကနေဘဲသယ်ရတာ...
rose of sharon August 5, 2009 at 6:58 AM
မအယ်ရေ ဒီမှာကဆိတ်သားကိုဈေးမှာတော့မရောင်းကြဘူး... အော်ဒါမှာရင်သာလာပို့ပေးတာ...
ဟုတ်တယ်သားကြီးရေ ကျေးဇူးရှင်ကသူလဲမသောက်တော့ ဒို့သောက်တာအားမပေးဘူး...
Kikiနဲ့သုနှင်းဆီ ဟိုချီမင်းကိုလာလည်ဖြစ်ရင်အကြောင်းကြားပါ... သူငယ်ချင်းကိုခေါ်ပြီးချက်ကျွေးခိုင်းမယ်...
စားချင်လိုက်တာ ရခိုင်မုန့် တီ
ဟီးဟီး မမကို ပြေားမလို့ ကျောင်းကနေ
rose of sharon August 5, 2009 at 7:46 AM
ဖြစ်ရလေမြူးလေးရယ်... မေ့တာလဲမေ့တာပေါ့... ဒါပေမဲ့ မမကိုပြောဘို့သင်လာတယ်ဆိုလို့ တကယ်ကိုဝမ်းသာကြည်နူးမိတယ်...
subuueain August 5, 2009 at 7:50 AM
ရခိုင်မုန့်တီ စားချင်တယ်။ ရခိုင်ချက်တာဆိုတော့တော်တော်ကောင်းမှာနော်။ ရခိုင်လူမျိုးချက်တဲ့ ရခိုင်မုန့်တီကို ဘယ်သူမှမမီဘူးလို့ကြားဖူးတယ်။ :D
ရေတမာ August 5, 2009 at 8:15 AM
မိုးကောင်းသူ August 5, 2009 at 8:58 AM
အတော်များနောက်ကျသွားပြီလား မသိဘူး။ ရှိတာတော့ စားသွားမယ်။ အဲမှာကော တညင်းသီးရလားဟင်။ ရခိုင်မုန့်တီကတော့ အကြိုက်ဆုံးဗျို့။ နောက်တစ်ပတ်ဘာချက်မလဲဆိုပြီး မျှော်နေမယ်နော်။
sonata-cantata August 5, 2009 at 9:11 AM
ပျော်စရာကြီး...ဒီမှာတော့လေ..ကိုယ်နဲ့ အရွယ်တူတွေက အလုပ်တဖက်၊ ပိတ်ရက်မှာလည်း အိမ်ထောင်တာဝန်တွေနဲ့ဆိုတော့ မဆုံဖြစ်ကြပါဘူး။ အိမ်နီးနားချင်း၊ ယောက္ခမကြီး သူငယ်ချင်း ခြောက်ဆယ်နှင့် အထက်များကြား ကလေးဗိုလ်ကြီး လုပ်နေတာ...(ရှူး တိုးတိုး)
ဒီမှာရှိတဲ့ ရခိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းပွဲ လုပ်ရင် ရခိုင်မုန့်တီ စားရပါတယ်...တလ တခါတော့ သူတို့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်..ကိုယ်ကသာ မသွားဖြစ်တာ..
အခုတော့ ပုံထဲက မုန့်တီဘဲစားသွားလိုက်ပါတယ်...
မေလေး August 5, 2009 at 12:25 PM
နေကောင်းပျောက်ခါစလူကို ရခိုင်မုန့်တီနဲ့မျှားခေါ်လို့ ရောက်လာပီမမရေ။
ကျောပိုးအိတ် August 5, 2009 at 7:40 PM
လင့်မယ်လင့်မယ်နဲ့ သမီး မလင့်ဖြစ်တာ တောင်းပန်တယ်နော်။
သမီးဆီ လာလာလည်ပြီး သမီးက ပြန်မလည်ဖြစ်တာ အရမ်းကို အားနာလိုက်တာ။
လင့်တဲ့အနေနဲ့ ရခိုင်မုန့် တီတွေ အားရပါးရ စားသွားတယ်။
rose of sharon August 5, 2009 at 11:08 PM
စုဗူးအိမ်နဲ့မီးငယ်>ရခိုင်ချက်တဲ့မုန့်တီကဘယ်သူမှတကယ်လိုက်မမီဘူး ထင်တာဘဲ.. ဒီမှာဘယ်သူမှကိုယ့်ဟာကိုယ်မုန့်တီချက်မစားကြဘူး... သူ့လက်ရာမမှီမှန်းသိလို့လေ... စားချင်ရင်သူ့ကိုဘဲချက်ခိုင်းကြတာ...
မသီတာ၊မေလေး>တကယ်ပျော်ဘို့ကောင်းတယ်... ဒီမှာမြန်မာနည်းတော့ရှိတဲ့သူတွေကအရမ်းစည်းလုံးကြတယ်...အရွယ်ကတော့အစုံပါဘဲ... ကိုယ့်ထက်နှစ်နှစ်လောက်ငယ်တဲ့သူက ကိုယ်တို့ထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး.. ကိုယ့်ထက်နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်လောက်ကြီးတဲ့သူကကိုယ်တို့ထဲမှာအကြီးဆုံး..
rose of sharon August 5, 2009 at 11:13 PM
ရေတမာ ဘာတွေရေးသွားပါလိမ့်... ကျောက်စာများလား?
မိုးကောင်းသူလေးရေ.. ဒီမှာဒညင်းသီးမတွေ့မိသေးပါဘူး... ရန်ကုန်ကလူကြုံပါလာတာပါ...
ကျောပိုးအိတ်လေးရေ... လင့်သွားတာကျေးဇူးပါ... မလာဖြစ်တာမအားလို့ဆိုတာနားလည်ပါတယ်ကွယ်...မအားတဲ့ကြားကလာလည်သွားတာကျေးဇူးနော်...
တန်ခူး August 7, 2009 at 7:29 PM
ညီမရေ… မိုက်တယ်နော်… အဲဒီအိုင်ဒီယာလေး… ယောင်္ကျားခရီးထွက်တုန်း အတူစုကြတာ… ရခိုင်မုန့် တီနဲ့ ငါးပိရည်… မြင်သာမြင် မကြင်ရပါ ညီမရေ… အစာအိမ်သမားလေ… ဆိတ်သားနဲ့ ကန်စွန်းရွက်ချည်ရည်ပဲ စားသွားတယ်…
Angel Shaper August 8, 2009 at 6:47 AM
မရေ..ပြောပြလိုက် မရဲ့ကလေးတွေ သမီးကိုတူတာလို့ ဟိဟိ။
rose of sharon August 8, 2009 at 8:15 AM
ဟုတ်တယ်တန်ခူးရေ... ယောင်္ကျားမရှိတော့သူငယ်ချင်းတွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားပြီး မီးဖိုထဲဝင်ချက်ပြုတ်ကြတာပေါ့ တကယ်ပျော်ဘို့ကောင်းတယ်...
Angelshaper... ဖြစ်နိုင်တယ်ညီမလေးရေ... ခလေးတွေကိုပြောပြလိုက်မယ်
လင်းကြယ်ဖြူ August 8, 2009 at 8:55 PM
အစ်မချက်ထားတာကိုမြင်ပြီး ဗိုက်တောင်ဆာသွားပြီ..း )
မီးမီးချစ် August 8, 2009 at 10:03 PM
ပုလင်းပဲ လာကူမော့ပေးမယ် ...း))..
ပေးမမော့ ရင် တိုင်ပြောမှာပဲ ..း))
rose of sharon August 8, 2009 at 10:13 PM
လင်းကြယ်ဖြူရေ... အမပျော်နေပါတယ်... ဆုတောင်းပေးတာကျေးဇူး မီးမီးချစ်ရေ တကယ်မော့မှာလား မော့ဖော်လေးလိုနေတာတော်ဘဲ ဖြစ်သွားပြီ...